Ukukhangisa Kwabomdabu Kokumaketha Okuqukethwe: Amathiphu namaqhinga ama-4 | Martech Zone
Ukumaketha kokuqukethwe kukuyo yonke indawo futhi kuya ngokuya kuba nzima ukuguqula amathemba abe ngamakhasimende esigcwele kulezi zinsuku. Ibhizinisi elijwayelekile alikwazi ukufeza noma yini ngezindlela zokukhokhela ezikhokhelwayo, kepha lingaphumelela ekuqwashiseni futhi lisebenzise imali ukukhangisa kwendabuko.
Lo akuwona umqondo omusha embusweni we-inthanethi, kepha imikhiqizo eminingi kakhulu isesehluleka ukuyixhaphaza ngokugcwele. Benza iphutha elikhulu njengoba ukukhangisa komdabu kufakazela ukuthi kungenye yezindlela zokwenza inzuzo ezinenzuzo enkulu ecishe iqinisekise ukuletha imbuyiselo oyifunayo kutshalo-mali.
Kepha kusebenza kanjani? Ungakwazi ukwenza ibhalansi elungile phakathi kokukhangisa komdabu nokumaketha kokuqukethwe? Uma ungaqiniseki ngempela ukuthi ungayiphendula kanjani le mibuzo emibili, qhubeka ufunda ukuze ufunde imigomo eyisisekelo yokukhangisa komdabu ekukhangiseni kokuqukethwe.
Akuyona imfihlo ukuthi ukumaketha kokuqukethwe kubusa indawo yonke yedijithali, kepha kuthiwani ngokukhangisa komdabu? Uma ufuna ngempela ukwazi ukuthi isebenza kanjani, kufanele uqonde ukuthi kusho ukuthini futhi uhlole izibalo eziyisisekelo kulo mkhakha.
Ukukhangisa komdabu ukusetshenziswa kwezikhangiso ezikhokhelwayo ezifana nokubukeka, imizwa, nokusebenza kwefomethi yemidiya ezivela kuyo. Imvamisa uzobona izikhangiso zomdabu njengezingxenye zezindaba zakho zenhlalo yezindaba noma kumawebhusayithi wakho owathandayo njengezincomo ze-athikili.
Izibalo Zokukhangisa Zomdabu
Amafomethi wokuqukethwe anjalo afana nokukhethwa kokuhlela okujwayelekile kwepulatifomu yokuxhumana enikeziwe. Lokhu yikho kanye okwenza ukukhangisa komdabu kuphumelele futhi kuthembeke:
Izikhangiso zokubonisa zomdabu zikhiqiza isilinganiso sokuchofoza (CTR) izikhathi 8.8 ephakeme kunezikhangiso ezijwayelekile zokubonisa.
Amakhasimende angu-70% uncamela ukufunda ngemikhiqizo ngokuqukethwe kunezikhangiso zendabuko.
Ababili kwabathathu babasebenzisi bathola okuqukethwe okuphakanyisiwe ukuba yindlela ewusizo kakhulu yokukhangisa komdabu.
Abakhangisi baseMelika bachitha cishe $ 44 billion kuzikhangiso zomdabu minyaka yonke.
Izinzuzo Zokukhangisa Kwabomdabu Kokumaketha Okuqukethwe
Ukukhangisa komdabu ngokusobala kunamandla, kepha kufanele wazi ukuthi kuza nobubanzi obubanzi bezinzuzo ezingokoqobo. Nazi izinzuzo ezinkulu zokukhangisa komdabu kokumaketha kokuqukethwe:
Izikhangiso zomdabu aziphazamisi: Ngokungafani namanye amafomethi wokwenyusa, izikhangiso zomdabu ziyasebenziseka futhi aziphazamisi. Njengoba nje igama liphakamisa, izikhangiso ezinjalo zibonakala zingokwemvelo nezingokwemvelo, okubenza bathandeke kakhulu kunezikhangiso ze-banner noma izigelekeqe.
Izikhangiso zabomdabu zithembekile: Abantu bavame ukubheka izikhangiso zomdabu njengezithembekile nezithembekile. Akumangazi, ikakhulukazi uma wenza ingxube ephelele yokukhangisa nokumaketha kokuqukethwe. Kulokhu, ungagcizelela kuphela izethameli ngokuqukethwe kwe-promo okuqondayo.
I-CTR ephakeme: Izikhangiso zabomdabu zinezinga eliphakeme kakhulu lokuchofoza (CTR) kunamafomu wokukhangisa ajwayelekile, okuwumphumela wokwethembeka nokwethembeka kwawo. Lolu hlobo lokukhangisa alucindezeli kakhulu, ngakho-ke abasebenzisi abanandaba nokudla okuqukethwe futhi bahlanganyele nakho ekugcineni.
Izikhangiso zomdabu zivumelana nawo wonke umuntu: Inhlanganisela yokukhangisa komdabu nokwakhiwa kokuqukethwe kufanelana kahle nawo wonke umuntu obambe iqhaza ebhizinisini. Abathengi bayakuthanda ngoba iletha okuqukethwe kwekhwalithi, kuyilapho abashicileli bekuthanda ngoba akuphazamisi okuthunyelwe okuphilayo. Ekugcineni, abakhangisi bayakuthanda ukukhangisa komdabu ngoba kuletha imiphumela ekhonjiwe.
Ukukhangisa komdabu kufanelana nazo zonke izingxenyekazi: Ungashicilela izikhangiso zomdabu cishe kuzo zonke iziteshi zokuxhumana ezikhona. Kusuka ezinkundleni zokuxhumana nakumawebhusayithi kuya komagazini bendabuko nezincwajana, ukukhangisa komdabu kusebenza kubo bonke abasebenzelana nabezindaba.
Izindlela ezi-4 Zokuthuthukisa Izikhangiso Zomdabu
Manje njengoba usuqonda izici ezibucayi zokukhangisa komdabu, okuwukuphela kwento esele ukuthi ufunde ukuthi ungakubhangqa kanjani nomzamo wakho wokumaketha okuqukethwe. Sikulungiselela uhlu lwamathiphu namasu amane awusizo:
Ithiphu # 1: Kwenze nezethameli engqondweni yakho
Umthetho wokuqala wokukhangisa komdabu akumele ube yi-brand-centric futhi ubhale nezithameli ezihlosiwe engqondweni yakho. Ungakhohlwa ukuthi izikhangiso zomdabu ezisebenza kahle zimane nje ziyizingcezu eziphakeme zokuqukethwe ezikhuthaza abafundi ngentshiseko enkulu nekhwalithi.
Umsebenzi wakho ukuhlaziya izintshisekelo zamathemba akho bese ugxila ezihlokweni ezihambisana nokulindela kwabo, amathemba abo, izidingo zabo, nezinkolelo zabo.
UJake Gardner, an umhlinzeki wesabelo at nezinsizakalo zokubhala zobungcweti, ithi kubalulekile ukuqonda ukuthi abathengi bacabanga kanjani ngendaba ethile: “Zama ukuthola izinkinga ababhekene nazo. Ngaleyo ndlela, ungalungiselela okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu okukhuthaza abantu ukuthi bathathe isinyathelo lapho befunda. ”
Ngasikhathi sinye, kufanele ucabange ngeziteshi ezihamba phambili zokusabalalisa. Ngabe ufuna ukubonisa izikhangiso ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi noma hamba namakhasi anconyiwe? Isincomo sethu ukuxhaphaza isiteshi owaziyo ukuthi singafinyelela izithameli zakho ngqo.
Ithiphu # 2: Dala amakhophi wokuma
Iningi labathengisi libheka ithiphu lesibili njengebalulekile njengoba lenza umehluko phakathi kwemikhankaso ephumelelayo nezikhangiso ezingenzi kahle. Okungukuthi, kufanele wenze konke okudingekayo ukulungiselela ikhophi yokuma yesikhangiso ngasinye somdabu ngamunye.
Okokuqala, okuqukethwe kudingeka kufundise kakhulu, kufundise, futhi / noma kujabulise. Okwesibili, izikhangiso zomdabu kulindeleke ukuthi zibe nenhloso futhi zingachemi. Iphuzu ukwenza iziphetho eziqhutshwa yidatha futhi usekele izitatimende zakho ngobufakazi.
Ngasikhathi sinye, okuthunyelwe kwakho kufanele kube okuphelele maqondana nesipelingi nohlelo lolimi. Iphutha elilodwa lingonakalisa idumela lakho, ngakho-ke kungcono uhlole ucezu ngalunye lokuqukethwe kabili ngaphambi kokuya bukhoma. Uma ukuhlolwa kokuhlola akuyona into yakho ngqo, sikukhuthaza kakhulu ukuthi usebenzise amapulatifomu edijithali afana nawo Grammarly or Hemingway.
Ithiphu # 3: Lungiselela ikhasi lokufika
Inhloso enkulu yazo zonke izikhangiso zomdabu ukuqondisa kabusha abasebenzisi ekhasini elihambisanayo lokufika. Ezimweni ezinjalo, kufanele uqiniseke ukuthi ikhasi lakho lokufika lihambisana kahle nomlayezo wokuqukethwe okudalile.
Kubalulekile ukusebenzisa isitayela esifanayo kanye nephimbo lokubhala ngamakhophi ukuze kuqinisekiswe izinga elilungile lokuvumelana komkhiqizo. Vele, ikhasi lokufika kufanele likhuthaze umkhiqizo noma insizakalo amathemba akho afunda ngayo.
Ekugcineni, leli khasi kufanele liqukethe ukubizelwa esenzweni okucacile futhi okubonakala kakhulu (i-CTA). Inkinobho ebekwe kahle ye-CTA inikeza izivakashi izinkomba ezengeziwe futhi ibakhombise ukuthi bangazibandakanya kanjani lapho befika.
Ithiphu # 4: Linganisa ukuze uthuthukise
Ithiphu lokugcina kuhlu lwethu ukukala imiphumela yokuqukethwe kwakho kokukhangisa kwendabuko ngoba ukuphela kwendlela yokwenza ngcono imikhankaso yesikhathi esizayo. Lo msebenzi ulula kakhulu uma ubeka izinhloso ezifanele futhi unquma izinkomba zokusebenza ezisemqoka (KPI).
Ngokuvamile, abakhangisi abaningi bagxila kumapharamitha amabili - ukubuka nokuchofoza. Ngenkathi ama-KPIs amabili ebaluleke ngempela, siphakamisa ukuthi sigxile entweni yesithathu eveza ngokuqondile impumelelo noma ukwehluleka komkhankaso wakho. Sikhuluma ngokubandakanyeka kokuchofoza ngemuva, ipharamitha esemqoka ekhombisa ngokusobala ukusebenza kokukhangisa komdabu.
Ukudalwa kokuqukethwe kungenye yemiqondo yokuthengisa enethonya kakhulu kule nkathi yethu, kepha akulula ukuthola indawo yakho elangeni ledijithali nabancintisana abaningi kuyo yonke indawo. Yilapho ukukhangisa komdabu kungenela khona ukusiza amabhizinisi ukukhulisa ukuzibandakanya komsebenzisi.
Kulokhu okuthunyelwe, sichaze umqondo wokukhangisa komdabu futhi sakukhombisa izindlela ezine zokukuhlanganisa ngempumelelo nokumaketha kokuqukethwe. Kufanele usebenzise lawa macebo namasu ukuklama imikhankaso engcono yokukhangisa yomdabu, kepha qiniseka ukuthi ubhala ukuphawula uma udinga iziphakamiso ezengeziwe ohlangothini lwethu - singajabula ukuphendula!
Tags: ukukhangisa kwendabukoincazelo yokukhangisa yomdabuizibalo zokukhangisa zomdabuamathiphu wokukhangisa omdabuizikhangiso zokubonisa zomdabuukuphuma kwengqondosocial mediaokuqukethwe okuphakanyisiwe
U-Alice Jones ungumthengisi wedijithali ovela eSan Francisco, eCalifornia. Ubhala okuthunyelwe kwebhulogi kokuhamba phambili qala kabusha izinsiza nezinhlangano zokudala okuqukethwe. U-Alice ungumama wezinsana ezimbili kanye nodokotela onothando we-yoga.